သင်ဒီမှာပါ: Home / သတင္းေၾကျငာခ်က္
12 / 08 / 2015 By ရော်ဂျာ PilonaComment ချန်ထား
ယူနိုက်တက်စတိတ် - ကကြိမ်ရိုးရာဥယျာဉ်သည့်စနစ်ထက်ပိုမိုအထွက်နှုန်း2မှ5အတူတိကျသောတည်နေရာအတွက်ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုဓာတ်မြေသြဇာနှင့်ဒီသေးသေးလေးများနှင့်တွက်ချက်သောငွေပမာဏကိုအသုံးပြုသည်ဖြစ်သောကြောင့်အဆိုပါ Mittleider ဥယျာဉ်စနစ်များကိုမူထူးခြားတဲ့တိတ်ဆိတ်ဖြစ်ပါသည်
Filed under: ကြီးထွားလာ Solutions, ဘယ်လိုတိုးတက်ကြီးပွားစေရန်, Hydroponics
21 / 07 / 2015 By ရော်ဂျာ PilonaComment ချန်ထား
ဂျပန် - ကစော်ဖောက်ခြင်းအညိုရောင်ဆန်ကိုသုံးပြီး 10% 300 သန်းပေါင်းများစွာအတွက်ဆန်ဘာသာပြန်ပိုပြီးအရေအတွက်ဆန်ပိုတန်ချိန်များကိုနိုင်ဘူး။ ဤသည် 287 သန်းပေါင်းများစွာပိုပြီးလူတို့ကိုကျွေးမွေးနိုင်!
စာမျက်နှာများ: 1 2
Filed under: ကမ္ဘာ့ Solutions နို့တိုက်ကျွေးမှု, အစေ့, ဆန် အတူ Tagged: ဂါဘမြို့သားဆန်, GBR, germinated အညိုရောင်ဆန်, ဂျပန်
03 / 07 / 2015 By ရော်ဂျာ Pilon 94 မှတ်ချက်
တောင်အာဖရိက - ထိုမေးစည်၏စိတ်ကူးတစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောအရင်းအမြစ်မှသောက်သုံးရေ၏လုံလောက်သောပမာဏသယ်ဆောင်ရုန်းကန်သူကိုတောင်ပိုင်းအာဖရိကရှိကျေးလက်နေပြည်သူများ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖို့တုန့်ပြန်ဝေါဟာရဖြစ်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်အသီးအသီးအသိုင်းအဝိုင်းများ၏အမျိုးသမီးများနှင့်ကလေးများအပေါ်၏အကြောင်းတစ်ဦးကအလုပ်တခုကို
Filed under: တင်ဆောင်လာသော အတူ Tagged: သောက်သုံးရေ, သောက်သုံးရေထမ်း, သောက်သုံးရေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, တောင်အာဖရိက
20 / 06 / 2015 By ရော်ဂျာ Pilon 104 မှတ်ချက်
ယူနိုက်တက်စတိတ် - အဲဒီမှာကဒီမှာ Tiny အိမ်များ, သေးငယ်သောအိမ်များ! အလွန်သေးငယ်သောအိမ်များအကြောင်းကိုကမ္ဘာတလွှားအတော်များများကသတင်း။ ငါသည်ဤမေးခွန်းမေးစရာနှင့်စိတ်ကိုရပ်တန့်နိုင်သည်က "la mode ကိုà" ပဲတစ်ခုခုဖြစ်ပြီးသို့မဟုတ်ပါကယ့်လမ်းကြောင်းသစ်ထက်ပိုပါသလဲ ဒီ post အလိုတော်အလွန်သေးငယ်သောအိမ်များကဒီမှာဆက်နေရန်သို့မဟုတ်မဖြစ်ကြပါလျှင်ကိုယ့်ကိုယ်အားဖြင့်ဆုံးဖြတ်ကူညီဖို့ရန်သင့်အားအမှန်တကယ်ခက်ခဲနံပါတ်များကိုပေးသည်!
Filed under: အိမ်ရာ Solutions အတူ Tagged: အလွန်သေးငယ်သောအိမ်များ, အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု
19 / 06 / 2015 By ရော်ဂျာ Pilon5မှတ်ချက်
ယူနိုက်တက်စတိတ် - ORGANIZATION Gardening တဦးတည်းအရာဖြစ်၏။ ORGANIZATION လယ်ယာအခြားတဦးတည်းပါ! တဦးတည်းအသက်ရှင်သောသတ္တဝါစေနိုင်သလား? ပိုပြီးအလုပ်လုပ်လား? အဆိုပါ Rodale Institute ကအတွေ့အကြုံထက်ပို 30 နှစ်ပေါင်းအပေါ်အခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများလယ်ယာအပေါ်ဤအစီရင်ခံစာကိုဖတ်ပါ။ ရှုမြင်သုံးသပ်ကြခံရဖို့ထိုက်တန်တစ်ဦးကစာရွက်စာတမ်း!
Filed under: ကြီးထွားလာ Solutions, ဘယ်လိုတိုးတက်ကြီးပွားစေရန်, အဖှဲ့အစညျး အတူ Tagged: PDF ဖိုင်ရယူရန်, အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု
15 / 06 / 2015 By ရော်ဂျာ Pilon 22 မှတ်ချက်
ကင်ညာ - တတိယကမ္ဘာနိုင်ငံများရှိပြည်သူ့အိမ်သာလည်းမကြာခဏပြည့်စုံဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကရှုပ်ထွေးရုပ်ဆိုးနှင့်စူပါညစ်ပတ်ဖြစ်ကြသည်။ အခုတော့တစ်ဦးရေရှည်တည်တံ့သန့်ရှင်းရေးဖြေရှင်းချက်အခုအချိန်မှာလည်းမရှိ။ အံ့ဖွယ် Sanergy ဂိမ်းစနစ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Filed under: သန့်ရှင်းရေး Solutions အတူ Tagged: composting အိမ်သာ, ကင်ညာ, အများပြည်သူအိမ်သာ
27 / 05 / 2015 By ရော်ဂျာ Pilon 120 မှတ်ချက်
ဖိလစ်ပိုင် - လူအတော်များများနေအိမ်များမှာ, ပွင့်လင်းအိမ်ရှေ့တံခါးမှတဆင့်ဝင်သောကြောင့်နေရောင်ခြည်၏သေးငယ်တဲ့ရောင်ခြည် မှလွဲ. တစ်နေ့တာအတွင်းအများအားဖြင့်မှောင်မိုက်ပါတယ်။ လျှပ်စစ်မီး, မရရှိနိုင်လျှင်, စျေးကြီးသည်။ လာသောအခါသူတို့လုပ်နိုင်အနည်းငယ်ပင်ပြုလုပ်မတတ်နိုင်နှင့်နိုငျသညျ, ကအစားအစာများ၏ကုန်ကျစရိတ်မှာများလွန်းမကြာခဏဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့လူတိုင်း day..for အခမဲ့ကာလအတွင်းနေရောင်ခြည်အလင်းရနိုင်!
Filed under: အလင်းရောင် Solutions အတူ Tagged: အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ပုလင်း, ဖိလစ္ပုိင္
23 / 05 / 2015 By ရော်ဂျာ Pilon 1 မှတ်ချက်
ဣသရေလအမျိုးကို - တစ် sustaible လမ်းအတွက် mouse ၏လူဦးရေ Controling ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ဖြစ်နိုင်သောပါ! ဒါကြောင့်အပေါ်မြည်, krestels နှင့်တူသောလုယူရာဥစ္စာငှက်ကို အသုံးပြု. rodenticides အစားထိုးပါ!
Filed under: Solutions ထိန်းချုပ်ခြင်းပိုးမွှား အတူ Tagged: ဣသရလေ, kestrel, မြည်, ကြွက်
21 / 05 / 2015 By ရော်ဂျာ Pilon7မှတ်ချက်
အိန္ဒိယ - တောင်သူများရုံပေါ်နှင့်ဆည်မြောင်းပန့်များချွတ်ပြောင်းတော့ဘူးရှည်လျားသောအကွာအဝေးလမ်းလျှောက်ဖို့မလိုပါ။ ဒီ gadget ကအသုံးပြုခြင်းဖြင့်။ အဆိုပါ Nano Ganesh သူတို့အလိုတော်ဆည်မြောင်းမှာဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်, မီးစက်သို့မဟုတ်လျှပ်စစ်ဓါတ်အားများအတွက်လောင်စာရေအများကြီးချွေတာညှစ်ထုတ်လိုက်။ ဆည်မြောင်းပိုပြီး Eco-friendly ဖြစ်လာ!
Filed under: ရေသွင်းခြင်း အတူ Tagged: ဆယ်လူလာ, အိႏၵိယ, ပန့်များ
19 / 05 / 2015 By ရော်ဂျာ Pilon 80 မှတ်ချက်
ဂျာမနီ - ကြီးမားတဲ့ရွက်ဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့်သင်္ဘောများကပို Eco-friendly လုပ်ပါ။ , လောင်စာအပေါ် Save ထုတ်လွှတ်မှုကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချပေးပါတယ်။
Filed under: Propulsion Solutions အတူ Tagged: ဂျာမနီ, နဂါးရွက်, သင်္ဘောတွန်းအား